कोरियामा माधब नेपाल-झलनाथ समूहले गठन गर्यो समानान्तर कमिटी – Eps Sathi
April 18, 2021 975
नेपाली राजनितीको अ’सर सात समुन्द्र पारी दक्षिण कोरियामा पनि देखिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेभित्रको बि’वादको अस’र यहाँ पनि परेको देखिन्छ। शनिवार कोरियामा नेकपा एमालेको माधब कुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। बेलुकी भर्चुअल माध्यम अर्थात जुमको माध्यमबाट १८ सदसिय समानान्तर कमिटी गठन भएको हो। नेकपा एमालेका केन्द्रिय कमिटी सदस्य तथा प्रवास समन्वयकर्ता समेत रहनुभएका श्रीप्रसाद शाहको प्रमुख आथित्यमा भएको भर्चुअल कार्यक्रममा यस्तो कमिटी गठन भएको हो।
समानान्तर कमिटीका अध्यक्षमा शुभराज भोम्जन सर्बसहमतिका आधारमा अध्यक्ष बनेका छन। कमिटीको उपाध्यक्षमा रमेश थापा मगर र अर्जुन बहादुर जागरी, महासचिबमा राजकुमार राइ सचिव पदमा अनिता रुम्बा, कोषाध्यक्षमा जगत बाइवा नियुक्त भएका छन। समानान्तर कमिटीको युवा विभागको जिम्मेवारी दशरथ कुँवरले पाएका छन भने सूचना तथा प्रचारप्रसार विभागको प्रमुखमा अमिर योन्जन नियुक्त भएका छन। अ’नुसासन विभागको प्रमुखको कार्यभार जगदिश घराडीले सम्हा’ल्ने भएका छन।
यस कमिटीको केन्द्रिय सदस्यहरुमा युवराज राइ, धनकुमार राइ, टिकाराम भट्टराई, उमेश कुँवर, झलक धामी, उदिप थुलुङ, कृष्ण देउजा, मदनकुमार गौतम र सन्जिव खतिवडा चयन भएका छन। यस कमिटीको सल्लाहकारको भुमिकामा सन्तोष बराल रहेका छन। कार्यक्रमका प्रमुख अथिती रहेका केन्द्रिय सदस्य श्रीप्रसाद शाहले नव गठित समितीका पधादिकारीहरुलाई स’पथ खुवाएका थिए।
सप’थ कार्यक्रमपछि बोल्दै केन्द्रिय सदस्य श्रीप्रसाद शाहले पार्टिभित्र भइरहेको अ’राज’कता, एकता बि’परीतका गतिबिधी, एकल निर्णय जस्ता कुराहरु रो’क्दै सबैले एकताका पक्षमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। विशेष अथितिका रुपमा प्रदेश नं. १ का प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व एसिया इन्चार्ज राजन राइ कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। नयाँ गठन भएको कमिटीका अध्यक्ष शुभराज भोम्जनले यो कमिटी समानान्तर नभइ आधि’कारिक भएको जिकि’र गरे।
Prevएक करोडभन्दा बढिले घुमिसकेको सउलको यो पार्कमा के छ त्यस्तो आकर्षक कुरा?
Nextबाहिरी विश्वका बारेमा चासो राख्न थालेपछि किम जोङले थ’र्काए आफ्नो देशका युवाहरुलाई